ပြန်လာပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Style & Beauty » ပြန်လာပြီ	23
Posted by etone on Aug 16, 2016 in Style & Beauty | 23 comments
ရွာထဲ မရောက်တာ တော်တော့်ကို ကြာပါပြီ ။
သတိရပေမယ့် ၀င်မရေးဖြစ်ဘူး ၊ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ နည်း သွားတာကြောင့်ရော အလုပ်က စိတ်ဖိစီးမှု များတာကြောင့်ပါ ရွာထဲ မရောက်နိုင်ခဲ့ဘူး ။ တခါတလေ လော့အင်မလုပ်ပဲ ၀င်ဖတ်မိတာကလွဲပြီး comment တောင် ၀င်မပေးဖြစ်ဘူး ။
ဖွဘုတ်မှာတော့ တောအော် တောင်အော် ထထလုပ်ဖြစ်တယ် ။စိတ်ခံစားမှု တစုံတရာရှိတိုင်း ချရေးလိုက်တာပဲ စာဖတ်သူလည်း အားမနာ ။
ရွာထဲမှာ စာရေးတာကျတော့ တောအော် တောင်အော် မလုပ်ရက်ဖူးပဲ ၊ အမှန်ကန်စာရေးနေကြတဲ့ လူတွေ ရှိတဲ့ အပြင် ၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ် စာဝင်ဖတ်နေတဲ့ လူတွေလည်းရှိတာကြောင့် ကိုယ်ပေါက်ကရ ရေးတာတွေကြောင့် အချိန်မကုန်စေချင်တာ အားနာတဲ့စိတ်ကြောင့် ၀င်မရေးဖြစ်ဘူး ။
ခုတော့ စာနည်းနည်း ပြန်ရေးမလား စိတ်ကူးမိတယ် ။ အဓိကတော့ အလှပနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ပို့စ်မျိုး ရေးမှာပါ ။ ပရိုအဆင့်မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်သိသမျှ sharing လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြန်လာမှာပါ ။
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြင်ထွက်လှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့ အမျိုးသမီးထုအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
မကြာခင် ပြန်လာပါဦးမယ် ။
အတောင်ပံလေးနဲ့ပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 242
Ko out of... says: ကိုခိုင် သတိရတယ်ဗျာ..ရွှာကိုပြန်လာခွင့်ပြုပါနော်…
kai says: ရွာသူားက.. Once ရွာသူား.. forever ရွာသူားပဲ..။
အချိန်မရွေးဝင်ထွက်နိုင်ပါကြောင်း…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3142
ဖိုးသာထူး says: မင်​ဂါဘာ အခုလို သတိတရရှိ​နေ​ပေးတာ အလွန်​ဝမ်း​မြောက်​ပါ​ကြောင်းးးးး
အရင်​ကလို ပြန်​လည်​စို​ပြေလာဖို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​ကြောင်းးး
အားလည်း တက်​မိပါ​ကြောင်းးးးးး (
etone says: သတိတွေတော့ရနေတာ ၊ ပျံသာမလာဖြစ်ခဲ့တာ ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ငင့် … အမျိုးသမီးတွေ အတွက်ပဲဆိုတော့ မတြားဘူး…
Welcome back … ဒေါ်etone Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7305
etone says: အမျိုးသမီးထု အတွက်ဆိုပေမယ့် အဲ့ အမျိုးသမီးကို ကြောက်စ် … အဲအဲ :D … ချစ်ရတဲ့ အမျိုးသားများလည်း ဖတ်လို့ရပါကြောင်း ခိခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 242
Ko out of... says: မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်လည်းရွှာကိုသတိရတယ်..
ဖိုးသာထူး says: လာဂဲ့
ညင်း​ကြတာ​ပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9
mhaw.sayar85@gmail.com says: မကြာမကြာလာပါ ၊ ခဏခဏလာပါ ၊ ဂတီးဂတီးလာပါ
မင်းတို့လက်တွေလေထဲကို မြှောက်ထားလိုက် …….
မှော်ဆရာ says: မကြာမကြာလာပါ ၊ ခဏခဏလာပါ ၊ ဂတီးဂတီးလာပါ
မှော်ဆရာ says: အဘတွေရဲ့စေတနာ 1500 ဖုန်းတွေ ပေါ်ပြီးသကာလ အူလဒူး နဲ့ တယ်လီနွားရဲ့ တိုက်ပွဲကြား မှော်ဆရာရဲ့ စကိုင်းပျက် အင်တာနက်ဆိုင်လေး ကန့်လန့်ကာချခဲ့ရသည့်နောက်ပိုင်း ရွာမရောက်ဖြစ်သည်မှာကြာ…..
ယခုတော့ အပြိုင်အဆိုင် Plan တွေ အရောက်တွန်းပို့မှုကြောင့်ပဲ ရွာကို ပြန်ရောက်တော့မည်လား မပြောတတ်တော့ပါ ။
ဖိုးသာထူး says: အရင်​အ​ကောင့်​​ဟောင်း ပျက်​သွားလို့လား က​မှော်​
etone says: ရွာထဲ လူအများကြီးနဲ့ စပ်စလူး နတ်ပူးသလို ဆုံခဲ့မိတာ ပျော်ဈာ :P
ဂျစ်စူ says: လာရင်လာဒယ်မှတ် မလာရင်မလာဘူးမှတ်
မမချွိ says: ယေ့ယေ့ယေ့။
ဒီ က စောင့်နေသူ
etone says: လာမည် ကြာမည်ပေါ့ ဟီး :D
Ma Ei says: အလှအပလေးတွေရေးမယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်
တီအိတို့ အရွယ်တွက်လဲ ရေးပေးနော်
etone says: ဟုတ်အန်တီအိ ။
မိန်းမတိုင်းကို လှစေချင်တာ ၊ အလှပြင်တဲ့ အလုပ်ကိုလည်း ရှက်စရာလို့ မြင်နေတဲ့ အမြင်ကို ဖယ်ပေးချင်တာ ။ လှချင်တိုင်းလှစေချင်တာမို့ စာပြန်ရေးဖို့ စိတ်ကူးမိပါတယ် ။
Thint Aye Yeik says: သားတို့အတွက်ကျတော့ကော…
.ပြန်လာပြီ… လာပြီ… ဒါမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက လျှပ်စစ်မီးလိုတော့ မလုပ်ရဘူးနော်။
အခုပဲလာ.. အခုပဲ…ပြန်ပျက်… မလုပ်ရဘူး သပ်လား။
etone says: သိဘူးအေ … လာချင်လာမယ် … မလာချင်မလာဘူး … လာချင်တဲ့အချိန်မှလာမှ မလာချင်တဲ့အချိန်ဆို မလာဘူး … ဟီးဟီးးးးး အစိုးမရတဲ့ခေတ်မှာမွေးခဲ့တော့ အဲ့အကျင့်စွဲတုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ရော် ၀ဲကမ်း
လုံမလေးမွန်မွန် says: ခုတလော အလှအပကို စိတ်ဝင်စားပြီး အလှပြင်ရတာကို သဘောကျနေတာ . . . ခုလို ရေးပေးမယ်ဆိုတော့ ပျော်စရာကြီး